IBSA ABO – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooIBSA ABO
(Ibsa ABO – Onkoloolessa 25, 2020)
Ajjeechaa suukaneessaan tibbana Kibba-Baha Oromiyaa Baalee-Roobeetti, Baha Oromiyaa
Awwadaayi fi Machaaraatti akkasuma Dhiha Oromiyaa magaalaa Naqamteetti raawwatame fi guutuu Oromiyaa keessatti dargaggoota Oromoo irratti guyyaa saafaadhaan raawwatamaa jiru sadarkaa ulfaatina nageenya Oromiyaa keessaa ifatti mul’isa.
Duulli dargaggoota Oromiyaa daandiirratti, mana jireenyaa keessaa baasanii fi iddoowwan
adda addaatti adamsanii dhabamsiisuu kan qaamota caasaa mootummaa turan adda addaatin raawwatamaa jiru jedhee ummatni amanu, ummanni wabii nageenyaa kan hin qabne tahuurra dabree, qaamota qabsoo Oromoo miidhaa turaniin kan qindaa’ee gaggeeffamuutti jiru dha jennee amanna. Waan taheef Ummanni keenyaa fi waliigalatti lammiileen Oromiyaa shira ka’imman lafarraa duguuguu akeekkate kana dammaqiinsaan akka ofirraa gamtaan tiksan dhaamna.
Jaarmayootni siyaasaa fi qabsaawonni mirga lammiilee Oromiyaaf falmitan, dhaabbattoonni
miti-mootummaa fi kan dhuunfaa, waldaaleen ogummaa fi siviikii walumaagalatti Lammiileen Oromiyaa ummataa fi biyya keenya balaa ulfaataa itti aggaamamee jiru irraa baraaruuf Mootummaan Cehumsa Biyyoolessaa Oromiyaa akka ijaaramuuf waamicha ABOn dhiyeesseef owwaattanii milkeessudhaan dirqama keessan akka bahattan irra deebiin hubachiifna.
Maayiirratti duulli ajjeechaa bakkayyuutti ilmaan biyyaa irratti xiyyeeffatee hidhattoota murna caasaa mootummaa caccabaa jiru adda addaatin raawwatamaa jiru, qabsoo ummanni haqa, dimokraasii, kabajaa namummaa fi bilisummaa isaa gonfatuuf gaggeessaa jiru taakkuu takka of duuba kan hin deebisne ta’uu hubachiisaa, kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisanis gaafatama seenaa fi seeraa jalaa kan hin baane tahuu ABO hundaaf ifa godha. Ummanni keenya adamsuu, hidhaa, dararaa fi ajjeechaa dabalatee duula bifa hedduu irratti gaggeeffamu jalaa bilisa bahuu kan danda’u, yoo Mootummaa Cehumsaa Biyyoolessaa Oromiyaa dhaabbatee Mootummaa kiyya jedhee amantaa irraa qabu ijaarrate qofa tahuu hubachiisaa, kanaafis qabsoo isaa jabeessaa aggaammii diinaa roga adda addaatin fuula itti deeffateef tika jabaa akka ofiif taasisu hireedhuma kanaan dhaamna.
Ajjeechaan dargaggoota irratti xiyyeffatee golee Oromiyaa mara keessatti waggata lamaaf
raawwatama bahe; raawwatamaas jiru, yaaddoo nageenyaa daranuu hammeessaa jiraachuu ummatni keenya hubatee akka kanatti furmaata gochuuf socho’uu hubachiifna.
Yaa Oromo wajiraalee Oromo hunduma hojaa irratii laalaa. Yerro kana kessatii wa’ee oromo quqaminssanii kan dubaachaa jiru wajiraa lammaa, issanis: KFO fi ABO dha. Kanaf wajiraalee kaneen ciminaan degaruun barebaachissadha jechu dha. Kanaf Qeerroon/Oromon namaas, wajiraalles hojaa irratii lalaa, sana bodaa degeresaa kessan kenaa.
Kane achii yeroo kana kessatii walijarrun hala biyaa kessatii jirrun, namootaa qeyee kessan kessaa jiraan hallaan wordofii (bassaassuun) barebachissu godhuun barebachissaa natii fakkaataa akka illaalchaattii. Kana gochuun rakkoon (hidhuun ykn ajessuun) tokko ottoo hin rawatamiin olleechuu wan danada’uuf, oddoo nammootaa qeyee oromo kessa jiraan guyaa guyaa dhan odduu issanii qabachuun barebachisuman issaa mamii hin qabu. Fkn, Hacaaluun ottoo himaatu Ambo “otton jiru enyuttuu na doresisaa” ottoo jedhuun nyatamee. Kan bira Namootaa Eskinder ha hikaamuu jedhanii hasa’an affan issaanii ottoo cufataan garii fakaataa, namiin kunn Qeerroo balaaleffachaa, maqa xuressaa akka ture bekkaamaa dha, sidaa minilik namuu hin tuqu jechaa ture dha. Kanaf hojjaan issaa issaa ha basuu Oromon garuu wa’ee nama kana hassa’uu irraa off qussaachu qaba, sanyiin issatuu wa’ee issaa hin hasa’an, akka illaalechaa kotii.
Lammaafaa qese phexeros fi shekkotaa ottoo himaataanii luubuun issaanii darberaa kanafiss wordofii qeyee keessattii fi odduu qabachuu dhabutii kana fidaa, ottoo oddu qabataanii sillaa bakkaa luubbuun issaanii ittii dabaretee sana irraa ollechuun ni danda’aamaa ture ykn immoo duraan duressaanii namootaa sana irraatii beekaamee akka wan kan irraa off qusaataan godhuun garrii ture. Kanaf wordofii fi ijaaraamuu jabessaa fi gara xumuraa garbumaatii deemuun barebachissaa fakkataa.
Sadaafaa,Oromon motumaa offii dhabaachuun falaa shakkii hin qabeneedha, akka Dr.Abiy nama tokko achii ereguun fallaa fiduu hin dandenyee, Maliiff fakkenyaan ibssudhaf pastaan bishaan ho’aatii galuun duraa jabedhuu dha, bishan ho’aatii yoo galeeteen bodaa hin lafeetii, kanaf oromon xiyeefaachuu kan qabuu bishaan ho’aa Dr. Abiy kessaa jiruu sana. Kanaf oromon motumaa cehumessaa dhabachuun barebachissaadha, hojaatii hikkufis tatafachuun garii dha.
Civil disobedience wins!!
Waqayoo issiin wallin ha ta’uu,
hin lafeetii kan ni lafeetii jetaanii dubisaa.
Yaada gaarii dhiyeessite! Oromoon hojii lafarratti hojjetamuu qabuu fi dursa kennamuu qabu hojjachuu dhiisee cal’isee taa’ee ilaala ykn hojii kan biraa dursa hin taane (not priority) hojjeta.
Dhimmi mootummaa cehumsaa biyyoolessa Oromiyaa ijaaruu kun yaada Oromoon halkaniif guyyaa irratti hojjechuu qabudha!
dhugaa jete dhuga jete
Jabeessaa hundee sabaa says:
Comment:jabaadha isiin duukaa jirraatti WBO tiyya